Wararka - Wadajir PG&E: Tesla waxay ka furi doontaa mashruuca ugu weyn ee keydinta tamarta magaalada Kaliforniya
Wadajirka PG&E: Tesla waxay ka furi doontaa mashruuca ugu weyn ee keydinta tamarta California
Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta shisheeye, Tesla waxay la timid iskaashi ay la yeelaneyso Shirkadda Korontada ee Gaaska Pacific (PG&E), oo ah mid ka mid ah shirkadaha tamarta ugu weyn Mareykanka, si ay u soo saarto nidaamka batteriga weyn ee leh awoodda ilaa 1.1GWh ee tan dambe. Electrek wuxuu soo wariyey in mashruucu yahay kii ugu ballaarnaa ee Tesla ay biloowdo tan iyo 2015 uuna ku yaal California, USA. PG&E waxay u adeegtaa qiyaastii 16 milyan oo qof bartamaha iyo waqooyiga California. Waxay u gudbisay codsiyada oggolaanshaha ee afar mashruuc oo kaydinta tamarta cusub Komishanka Adeegyada Bulshada ee California (CPUC) usbuucii hore.
Tesla ayaa bixin doonta xirmooyinka baytariyada ee mashruucan cusub, oo wadar ahaan soo saaraysa 182.5MW iyo muddo dhan 4 saacadood. Taas macnaheedu waa in awoodda guud ee la rakibay ay gaartay 730MWh, taasoo u dhiganta in kabadan 3000 oo meelood oo ah TeslaPowerpack2.
Ka qaadashada xogta 2016 ee Maamulka Macluumaadka Tamarta ee Mareykanka tixraac ahaan, celceliska isticmaalka korantada ee sanadlaha ah ee macaamiisha shirkadda Mareykanka ee adeegga waa 10,766 kWh, taasoo macnaheedu yahay in mashruuca cusub uu siin karo koronto ku dhawaad ​​100 qoys sanadka oo dhan.
Haddii la oggolaado, dufcaddii ugu horreysay ee mashruucyada kooxdu waxaa la filayaa inay toos uga baxaan internetka ka hor dhammaadka 2019, iyo mashaariicda kale ayaa la rajaynayaa inay khadka tooska ah uga baxaan internetka kahor dhammaadka 2020. Waxa xiisaha lihi, tani waxay umuuqataa inay la jaan qaadayaan himilooyinkii Musk.
Sanadkii 2015, Musk wuxuu markii hore ku dhawaaqay in mustaqbalka "Tamarta Tamarta" loo adeegsan doono mashruucyo cabirkiisu yahay 1GWh. Laakiin si aad u aragto tan oo dhacday, waxaad u baahan tahay inaad sugto saddex sano.
Dhamaadkii 2017, Tesla wuxuu khamaal la galay dowladda South Australia, isagoo leh shirkaddu waxay ku dhammeyn kartaa rakibidda nidaamka kaydinta tamarta weyn ee batroolka boqol maalmood gudahood, oo ay u adeegsan karto habka ugu sarreysa iyo yareynta dooxada si loo yareeyo awoodda maxalliga ah. xiisadda ka bixitaanka. dhammaaday.
In kasta oo Tesla ay caan ku tahay dhismaha gawaarida korantada, min Australia ilaa Puerto Rico, shirkaddu waxay dib-u-habeyn ku haysaa korantada adduunka si ay uga dhigto mid raqiis ah tamarta.
Mashruuca South Australia wuxuu gaadhay guulo ganacsi oo weyn, waxaana la qiyaasayaa inay badbaadisay in kabadan $ 30 milyan dhawr bilood gudahood. La-hawlgalaha McKinsey GodartvanGendt ayaa ka sheegay shirkii Toddobaadka Tamarta ee Australia ee ka dhacay Melbourne bishii May ee sannadkan:
Afartii bilood ee ugu horreysay hawlgalka mashruuca keydinta tamarta ee Hornsdale, soo noqnoqodka adeegyadan hoos u dhaca ayaa hoos loo dhigay 90%. Koonfurta Australia, baytariyada 100MW waxay heleen in kabadan 55% dakhliga FCAS, taasi waa, oo leh 2% awooda wax soo saarka, kuna tabaruca 55% dakhliga.
FastCompany ayaa soo warinaysa in muddo saddex sano gudahood ah, ay shirkaddu rakibtay kaabayaal ku filan oo ay ku kaydiso wadarta 1GWh ee tamar, taasoo muhiim u ah adeegsiga tamar cusboonaysiinta.
Sannadkii hore, Tesla waxay qandaraas la gashay xarumaha ugu badan ee keydinta tamarta adduunka. Horumarinta 1.1GWh ee mashaariicda cusub ayaa laban laabi doonta awoodda xarumaha tamarta.
Waxaa xusid mudan in qiimaha kaydinta bateriga ee warshadaha oo dhami hoos u sii dhacayo - laga soo bilaabo 2010 illaa 2016, wuxuu hoos u dhacay 73%, taas oo ah, 1000 dollars halkii KWh ilaa 273 doolarka Mareykanka.
Bloomberg waxay rajeyneysaa in marka la gaaro 2025, qarashkani inuu hoos ugu sii dhici doono $ 69.5 / KWh. Waxaan rajeyneynaa in dadaallada sii socda ee Tesla ay dhiirigelin doonaan kuwa ka soo horjeedaa inay ku soo biiraan tartanka si ay u sii dardar geliyaan howshan.
Xidhmada Aaladda Batteriga, Unugyada Baytariyada Lithium Ion, Battery Lithium Batteriga, Batroolka 20ah Lithium Ion, 3.6v Bathiil Lithium-Ion, Xidhmada Aaladda Batroolka Lithium,